I-China Abakhiqizi Bamatende Okuzenzekelayo I-Pop Up Wholesale Abahlinzeki Bathenga Itende Lamatende Langaphandle Umkhiqizi Nomhlinzeki | NQ
Itende lokukanisa elinendawo evulekile yomuntu ongu-4, usayizi waphansi we-7'3 '' x 7'8 '' onobude obungu-4'7 '' obuphakathi nendawo ukuze ulingane wonke umndeni. Ama-vestibules amakhulu ezinhlangothini zombili zezinto zakho noma inja yakho. Izisindo ezingama-7.4 lbs zilungele ngokuphelele itende lomuntu ongu-4 lokuthwala ubhaka.
Ngabe ufuna ukwenza amatende afinyeleleke kalula? Khetha itende lekamu eligoqiwe ngobuhlakani. Amatende ethu okuphathekayo okusonga afaka phakathi izici ezihlakaniphile zokwenza amatende abelula futhi afinyeleleke kalula. Ngoba zenzelwe okuhle ngaphandle, zinzima ngokwanele ukumelana nokuzidela kwakho okukhulu kakhulu kwangaphandle. Engasindi futhi icwecwe, amatende ethu enkampu okusonga aklanyelwe ukuya lapho uya khona.
Ukuma kwamahhala nezigxobo ezimbili ezingasindi ze-Aluminium design for pitching fast. Kulula ukusetha ngaphandle kwesipiliyoni. Leli tende elihlanganisa ubhaka lihlanganisiwe futhi liyaphatheka, futhi lihle ngokuHiking, iBikepacking, Kayaking, Mountaineering, Fishing noma Car Camping
I-1.The tenting Camping yenziwa ngendwangu ye-polyester ehlala isikhathi eside futhi enemibala egqamile enamanzi.
Kungasongwa, konga isikhala futhi kube lula ukuphatha.
3.Ivula futhi igoqeke ngokwesibili futhi akukho mhlangano odingekayo
I-4.OEM / ODM iyatholakala.
5.Customize logo yamakhasimende njengesipho sokuphromotha.
Ngokuhambisana nefilosofi yanamuhla yokuvikelwa kwemvelo.
7.Singanikezela ngezinhlobo zezinto njengokwemfuneko eyenziwe ngezifiso.
Iphakethe elijwayelekile: Dia.60cm / esikhwameni
Uma unesidingo esikhethekile ungazise nje, sizokwenza konke okusemandleni ethu ukukusiza.
Langaphambilini Ukuqeqeshwa okuprintiwe ikhwalithi enhle pu isikhumba mma isibhakela amagilavu ​​okuwina amagilavu ​​we-logo wesibhakela wangokwezifiso
Olandelayo: Isitolo esidayisa yonke impahla eshibhile eshibhile esishintshayo esinesisindo se-Magnetic Massage Foam Fitness HuLa Hula Hoola Sports Fitness Ring Hoop enesisindo